‘एक करोड पर्यटक आउने वातावरण बनाउनुपर्छ’ - अन्तरवार्ता - साप्ताहिक
‘एक करोड पर्यटक आउने वातावरण बनाउनुपर्छ’
- महेश तिमिल्सिना
पुस १३, २०७६
भ्रमण वर्ष, २०२० नजिकिँदै जाँदा संस्कृति, उड्डयन तथा पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईको व्यस्तता बढेको छ । भ्रमण वर्ष लक्षित कार्यक्रम, बैठकहरूमा उनी बिहानदेखि बेलुकासम्म व्यस्त हुन्छन् । गत बुधबार अपरान्ह अति व्यस्तताका बीच साप्ताहिकका महेश तिमिल्सिनाले भट्टराईसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२० मा विदेशी पाहुनालाई कसरी स्वागत गरिँदैछ ?
नेपाल सरकारले सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्षका रूपमा मनाउने घोषणा सन् २०१७ मै गरेको हो । घोषणा गरिरहँदा यसका केही निश्चित उद्देश्य थिए । त्यो मध्ये २०२० मा २० लाख पर्यटक नेपाल भित्र्याउने, पर्यटन क्षेत्रका केही प्रमुख पूर्वाधारका काम पूरा गर्ने उद्देश्य थियो । साथै नेपालको अर्थतन्त्रको एउटा प्रमुख आधार पर्यटन हो भन्ने कुरालाई देशभित्र स्थापित गर्ने र त्यही अनुसारको नीति कार्यक्रम बनाउने पनि यसको लक्ष्य थियो । त्यही उद्देश्यलाई सफल बनाउन हामी भ्रमण वर्ष २०२० को तयारीमा जुटिरहेका छौं ।
विषेशगरी पूर्वाधारको कुरा गर्दा हवाई र सडकको कुरा आउँछ । यसपछि होटललगायतका अन्य क्षेत्रका कुरा आउँछन् । यतिबेला हामीसँग एउटा मात्र विमानस्थल छ । जसले वार्षिक ७२ लाख यात्रुलाई सेवा दिइरहेको छ । विज्ञहरूको भनाइअनुसार यसको क्षमता वार्षिक ९० लाखभन्दा बढी छैन । यो विमानस्थललाई हामीले जति विस्तार अथवा सिंगारपटार गरे पनि त्यसले दिन सक्ने सेवा भनेको ९० लाख भित्र नै हो । तर अहिले हाम्रो हवाई यात्रा प्रयोग गर्ने यात्रुको संख्या वार्षिक १० प्रतिशतका दरले वृद्धि भैरहेको छ अर्थात् त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अब एक–दुई वर्षमा ‘स्याचुरेटेड’ हुन्छ । लुम्बिनीमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउँदैछौं, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि बन्दैछ । यी विमानस्थलले काठमाडौंको चापलाई केही हदसम्म सहयोग गर्छन् । तर, यहाँको चापलाई उल्लेख्य मात्रामा यिनीहरूले बोक्न भने सक्दैनन् । किनभने यी विमानस्थलहरू राजधानीभन्दा टाढा छन् । त्यसकारण निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाई हुँदैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो ।
पर्यटनको विकासका लागि २० लाख पर्यटकमात्र होइन । अब १० वर्षभित्र नेपालको मुख्य पर्यटकीय पूर्वाधारको काम सम्पन्न गर्नुपर्छ र १० वर्षपछि हरेक वर्ष १ करोड पर्यटक आउने वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच रहेको छ । त्यसका लागि पहिलो त एयरपोर्ट नै चाहिन्छ, विदेशी आउने भनेको त एयरपोर्टबाटै हो । त्यसकारण पनि निजगढको अपरिहार्यता देखिरहेका छौं ।
पूर्वाधारको सीमितता, सडकको अवस्था, ट्राफिक जाम, धूवाँधूलो आदि प्रतिकूलता छँदै थिए, अब पर्यटन बोर्ड पनि नेतृत्वविहीन भयो । कसरी सफल होला भ्रमण वर्ष ?
केही कुरामा प्रतिकूलता हुन्छन् त केहीमा अनुकूलता । विगतको तुलनामा एयरपोर्टहरूको स्थिति सुधार भएको छ । हामीसँग ५३ वटा आन्तरिक विमानस्थल छन् । यीमध्ये ३४ वटा विमानस्थलमा हवाई उडान हुन्छ । ती ३४ वटा र बाँकी अरूलाई पनि आधुनिकीकरण गर्ने, बिस्तार गर्ने भनेर हामीले हरेक विमानस्थलमा केही न केही काम गरिरहेका छौं । सडक यातायातका कुरा गर्ने हो भने सडक यातायातको गुणस्तरमाथि प्रश्न गर्न सकिन्छ, तर सडक यातायातको पहुँच त हिजोभन्दा आज बढेको छ ।
सडकको गुणस्तर पनि सधैं यही अवस्थामा रहँदैन । सरकारले सडक पूर्वाधारमा विशेष जोड दिएको छ र बजेटको ठूलो हिस्सा लगानी नै सडकमा गरेको छ । त्यसैले आगामी केही वर्षभित्र सडकको स्थिति यो भन्दा धेरै राम्रोसँग सुधार्छौं । हाम्रो कनेक्टिभिटी एक्सेबिलिटी पनि बढ्दै जान्छ । अहिले नै पनि चार वटा पूर्व–पश्चिम हाई वे समानान्तर ढंगले काम भैरहेका छन् । हुलाकी राजमार्ग, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, मध्यपहाडी पूष्पलाल राजमार्ग । नौ वटा उत्तर दक्षिण राजमार्गमा एकसाथ काम भैरहेका छन् । यसले कनेक्टिभिटीलाई जोड्दै लान्छ र पहुँचलाई बढाउँदै जान्छ । साथै पर्यटन प्रवद्र्धनमा पनि ठूलो भूमिका खेल्छ ।
अलिअलि प्रतिकूलता जहाँ पनि हुन्छन् । त्यसबाट डराउने, भाग्ने, आत्तिने होइन त्यसलाई सामना गर्ने र अनुकूलतामा बदल्ने हो । करिब ५/६ महिना जति मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्व खाली भयो । जसले गर्दा यसको तयारी जुन उचाइमा पुग्नुपर्‍थ्र्यो । त्यसले केही समस्या भयो होला । म आइसकेपछि पनि केही समय बुझ्नै समय लाग्यो । त्यसले पनि मैले जुन स्पिड लिनुपर्‍थ्र्यो त्यो लिन सकिन होला । जिम्मेवारी भन्ने कुरा त अविच्छिन्न हुन्छ । म नभए पनि मन्त्रालय हुन्छ । यहाँ कर्मचारी तथा विभिन्न निकाय छन् । साथै भ्रमण वर्षको सचिवालयले पनि काम गरिरहेको छ । अब अहिले नेपाल पर्यटन बोर्डमा मुख्य कार्यकारी निर्देशकको समय सकियो । त्यो त यही बेला सकिएला भन्ने अनुमान गरिएको त थिएन ।
तर, केही कर्मचारीले बोर्डमा काम गर्ने वातावरण छैन भनेर राजीनामा दिए, सचिवालयको काम पनि अपेक्षाकृत सन्तोष गर्न लायक छैन । राजनीतिक हस्तक्षेप भयो भन्ने आरोप पनि छ ? के भन्नुहुन्छ ?
त्यहाँ कुनै पनि राजनीतिक हस्तक्षेप छैन । त्यहाँ आएका नेतृत्वलाई हेर्ने हो भने उहाँहरू कुनै राजनीतिमा संलग्न भएको व्यक्ति होइन । राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो व्यावसायिक प्रतिष्ठाबाट नाम कमाएका व्यक्तिहरू नै हुनुहुन्छ । उहाँहरूलाई हाम्रो नियमावली र कार्यविधिले पूर्ण अधिकार दिएको छ । नेपाल पर्यटन बोर्ड भनेको यो पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसीप मोडलको संस्था हो । त्यसो हुँदा त्यहाँ को सिइओ राख्ने भन्ने कुरा पनि सरकारले नियुक्ति गर्दैन । छनोट समितिबाट प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्ति हुन्छ । अहिलेका दीपकराज जोशी पनि प्रतिस्पर्धाबाटै आउनुभएको हो । अब आउने व्यक्तित्व पनि त्यही प्रक्रियाबाट आउनुहुन्छ ।
नेपाल घुम्न आउने पर्यटकका लागि विशेष प्याकेज के छन् ?
सन् २०२० लाई विशेष भ्रमण वर्ष भनिसकेपछि हामीले विदेशीहरूलाई आकर्षण गर्न केही न केही प्याकेज दिनुपर्छ । त्यसको हामीले तयारी गरेका छौं । यो निजी क्षेत्र र सरकारी क्षेत्र दुवैबाट हुन्छ । सरकारी क्षेत्रबाट पनि केही प्याकेजहरूको हामी अन्तिम निष्कर्षमा पुगेका छौं । जस्तो, अहिलेसम्म आरोहण गर्न अनुमति नदिएका हिमाललाई यो अवसरमा आरोहणको अनुमति दिने । त्यस्ता केही हिमालहरू खोल्दैछौं । हिमाल आरोहणका लागि लाग्ने रोयल्टीमा केही हदसम्म छुट दिने कुराको अन्तिम तयारीमा पुगेका छौं । क्याबिनेटबाट अब केही दिनभित्रमा त्यसको घोषणा गर्छौं । त्यस्तै, विभिन्न राष्ट्रिय निकुञ्जमा प्रवेश गर्दा अथवा प्रतिबन्ध लगाइएका स्थानहरूमा प्रवेश गर्दा केही निश्चित शुल्क तिर्नुपर्छ । त्यो शुल्कलाई पनि केही मात्रामा घटाउन गृहकार्य गरिरहेका छौं । त्यो पनि सरकारको तर्फबाट घोषणा हुन्छ । निजी क्षेत्रको तर्फबाट होटल संघ, ट्रेकिङ, ट्राभल, होमस्टेका विभिन्न संघसस्थाहरूले आफ्नो छुट घोषणा गर्नुभएको छ । यस्तै वायुसेवा सञ्चालकका साथीहरूले भ्रमण वर्षको अवसरमा आन्तरिक उडानमा केही छुट गर्छौं भन्नुभएको छ । यसरी सरकारी र निजी क्षेत्रबाट प्रदान गरिएका प्याकेजलाई एकीकृत गरेर एक–दुई दिनभित्रै घोषणा गर्छौं ।
भ्रमण वर्षलाई जोड्दै गर्दा चाइना मार्केटलाई बढी हेरिएको जस्तो देखिन्छ, हाम्रो प्राथमिकता कहाँ–कहाँ हो ?
हामीले १० वटा मार्केटलाई टार्गेट गरिरहेका छौं । नेपालमा पर्यटक आउने सबैभन्दा बढी मार्केट तिनै हुन् । विश्वका सबै मुलुकमा हाम्रो प्रचार–प्रसार हुन्छ नै तर विशेष ध्यान १० वटा मुलुकमा दिन्छौं । हाम्रो मिडिया फोकसदेखि लिएर जनशक्ति परिचालन पनि बढी त्यहीँ गर्छौं । ती मुलुकमा अवश्य पनि चीन, भारत, जापान, बेलायत, बंगलादेश, श्रीलंका, म्यानमार, थाइल्यान्डलगायतका मुलुकहरू आउँछन् । ती मुलुकमा नै हाम्रो बढी फोकस हुन्छ । तीमध्ये कतिपय देशहरू जो हिमाल आरोहण, ट्रेकिङतिर बढी आकर्षित देखिन्छन् । कतिपय बन्जी जम्प, प्याराग्लाइडिङतिर आकर्षित छन् भने कतिपय धार्मिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा आकर्षित छन् । यी दस वटा मार्केटमा जुन–जुन क्यारेक्टरका पर्यटकहरू नेपालमा आउन सक्छन् । उनीहरूलाई सहज बनाउने बातावरण गर्छौं ।
भ्रमण वर्षमा २० लाख पर्यटक नेपाल ल्याउने भनिरहेका छौं । संख्या बढाउने कुरालाई बढी प्राथमिकता दिन्छौं कि पाहुनालाई गुणस्तरीय खालको सत्कार गर्ने कुरामा ?
संख्या आफ्नो ठाउँमा छ । २० लाखको ठाउँमा २२ लाख पनि पुग्न सक्ला अथवा १९ लाखमात्र पनि हुन सक्ला । तर यो २०२० को महत्वपूर्ण लक्ष्य के हो भने नेपाल सरकार, निजी क्षेत्र र सम्पूर्ण पक्षमा पर्यटन सम्बन्धमा आत्मविश्वास जगाउने सबैभन्दा ठूलो लक्ष्य हो । मलाई विश्वास छ, २०२० को अन्त्यमा पुग्दा नेपालको आत्मविश्वासको लेभल बढ्छ । पछिल्ला केही घटनाले पनि आत्मविश्वास बढ्दै गएको छ । दक्षिण एसियाली खेलकुदको व्यवस्थापनले हाम्रो आत्मविश्वास बढाएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङलगायत प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तिहरूको भ्रमणका क्रममा भएको सफल व्यवस्थापनले पनि हाम्रो आत्मविश्वास बढेको छ । त्यसैले यो २०२० को पर्यटन प्रवद्र्धनको वर्षले पनि हाम्रो आत्मविश्वास बढाउँछ । त्यही आत्मविश्वासको जगमा टेकेर हामी १० वर्षको नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनको नयाँ घोषणाका साथ अघि बढ्छौं ।
छिमेकी देशहरूबाट आएका पर्यटकहरू आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएको पाइन्छ, यस्तो खालको सुरक्षा चुनौतीको सम्बोधन कसरी हुन्छ ?
नेपाल भ्रमणमा आएका पर्यटकहरू हाम्रो नीति–नियममा बस्नुपर्छ । त्यो उल्लंघन भयो भने त्यसमाथि निगरानी गर्ने हो । दोस्रो कुरा आएका पर्यटकहरूको सुरक्षाको कुरा हुन्छ । यी दुवै कुरामा सरकारले ध्यान दिन्छ । जस्तै ट्रेकिङ जाने पर्यटकका निम्ति प्रत्येकले एउटा गाइड लानुपर्छ भनेका छौं । हामीले चौबीसै घन्टा पर्यटन बोर्डबाट सूचना लिन्छौं । कुनै पर्यटक आपत्–विपत्मा परे भने हामी आपत्कालीन उद्धार पनि गर्छौं । कोही पर्यटक बिरामी परे भने आपत्कालीन उपचारका लागि सम्बन्धित ठाउँमा लैजान्छौं । यस्तै पर्यटकलाई जुनसुकै समस्या भए पनि हाम्रा जति पनि सरकारी कार्यालय, गैरसरकारी क्षेत्रका संघसस्था मिलेर उनीहरूको सुरक्षामा ध्यान दिन्छौं । नेपाल एउटा शान्ति भूमि हो । त्यसैले कुनै पनि पर्यटक अथवा विदेशीहरूले अर्को देशको विरुद्धमा आपराधिक गतिविधि गर्न पाइँदैन । त्यसैले त्यसलाई हामी कडा निगरानी गर्छौं ।
पर्यटकहरूलाई प्राकृतिक मनोरम देखाएर ठूला व्यापारिक कम्पनी मात्र धनी भए तर स्थानीय तहमा विदेशी पर्यटक पुर्‍याउन सकिएन किन ?
नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को तयारीको सिलसिलामा मैले सयौं बैठक गरिसकें । यी बैठकहरू गर्दा पर्यटनका सम्बन्धमा जागरुकता बढेको छ । हरेक गाउँपालिकाले पर्यटन प्रबद्र्धनमा आफ्नो बजेटको निश्चित हिस्सा खर्च गर्न थालेका छन् । उनीहरूले काठमाडौं आएका विदेशी पर्यटकहरूलाई आफ्नो ठाउँसम्म कसरी ल्याउने भन्ने कुरा सोचिरहेको देख्छु । त्यो धेरै राम्रो कुरा हो । आज त्यसमा उल्लेख्य प्रगति नभए पनि यसले क्रमश: प्रगतितर्फ लान्छ । पर्यटनका केन्द्र भनेका काठमाडौं, पोखरा, सौराहा, सगरमाथा क्षेत्र, खुम्बु क्षेत्र, अन्नपूर्ण क्षेत्र मात्र होइनन् । देशभरि नै पर्यटनका त्यत्ति नै सम्भावना छन् भनेर २०२० मा स्थापित गर्छौं ।
वाइल्ड लाइफ र ल्यान्डस्केपमा मात्र प्राथमिकता दिइरहेको देखिन्छ, अन्य पर्यटकीय सम्भावनालाई ब्रान्ड बनाउन हामी चुकेका हौं ?
नेपालसँग भएको प्रोडक्ट भनेको एकातिर प्रकृति हो भने अर्कातिर संस्कृति पनि हो । यही प्रकृति र संस्कृतिलाई जोडेर लाने हो । त्यसमा पनि पर्यटकको आफ्नै इच्छा हुन्छ । कोही धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटक हुन्छन्, उनीहरूको इच्छाअनुसारको घुम्ने प्रबन्ध हामीले मिलाउनुपर्छ । घुम्न जाने ठाउँहरूमा खाने–बस्ने ठाउँ राम्रो होस् भनेर स्थानीय तहहरूसँगको साझेदारीमा होमस्टेको कन्सेप्ट अघि बढाउँदैछौं । सांस्कृतिक सम्पदाहरूको सरसफाइमा स्थानीय तहले जोड दिनुपर्छ भनिरहेका छौं । साथै संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेताहरू, उहाँहरूका भातृसंगठन, जनसंगठनहरूलाई बोलाएर तपाईंहरूको अबको एजेन्डा पर्यटन क्षेत्र हो है भनेको छु । एउटा मनोविज्ञान बनाइरहेका छौं ।
मुख्य सहरकै वातावरण पर्यटकमैत्री छैन, जस्तो खानेपानी, शौचालयजस्ता सुविधाको अभाव देखिन्छ यस्तो अभावलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?
समस्या चाङका चाङ छन् । यसको मतलब नेपालमा पर्यटनको कुरा उल्टो दिशातिर जान्छ भन्ने होइन । बाटोघाटोको समस्या छ, यो हामी बनाउँदै जान्छौं, सरसफाइको कुरा छ, हिजोभन्दा आज सरसफाइको अवस्था सुदृढ छ, अझै गर्दै जान्छौं । सार्वजनिक ठाउँहरूमा आराम गर्ने ठाउँ छैनन्, शौचालय छैनन् यी सबै कुरा बनाउँछौं ।
दोहोर्‍याएर नेपाल भ्रमणमा आउने पर्यटकलाई नयाँ स्वाद दिन कस्ता योजना बनेका छन् ?
यसका लागि हामीले नयाँ प्रोडक्टहरू तयार पार्नुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहसँग हिजोको जस्तो जताततै बजेट नछरौं, खास उपलब्धि हुने ठाउँमा बजेट लगानी गरौं । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह मिलेर हरेक प्रदेशमा कमसेकम एक–दुई वर्षभित्रमा पर्यटनका निम्ति ठूला–ठूला प्रोडक्टहरू बढाऔं भन्ने प्रस्ताव गरेका छौं । आउने बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा हामी त्यसतर्फ ध्यान दिन्छौं । साथै १० वर्षभित्र हामी अध्ययन मात्र गर्दैनौं । १० वर्ष पर्यटन प्रवद्र्धनका निम्ति पूर्वाधारमा के–के काम गर्ने ? प्रमोसनमा के–के काम गर्ने ? नयाँ प्रोडक्टहरू कसरी बनाउने ? साझेदारी कसरी गर्ने ? जनचेतना कसरी फैलाउने ? साथै जनशक्तिको निर्माण कसरी गर्ने भन्ने कुरामा जोड दिन्छौं ।
पर्यटकहरूलाई जति भ्रमण लम्ब्यायो उति नै आम्दानी हुन्छ, पर्यटकलाई लामो समय नेपाल टिकाउने योजनाहरू के छन् ?
टिकाउन पनि धेरैभन्दा धेरै प्रोडक्ट चाहिन्छ । साथै सहजताका साथ जाने–आउने कनेक्टिभिटी चाहिन्छ । हाम्रो हस्पिटालिटी नराम्रो छैन । अझै राम्रो गर्ने हो । मूलत: नेपालमा भएका प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरूले नै उनीहरूलाई टिकाउने हो । त्यसमा मानवीय पक्ष भनेको उहाँहरूलाई गर्ने व्यवहार हो । त्यो व्यवहार हामीले राम्रो गर्‍यौं भने पर्यटक नटिक्ने कुनै कारण छैन ।
आन्तरिक पर्यटक लक्षित कार्यक्रम कत्तिको चलाइरहेका छौं ?
हामीले बाह्य पर्यटक २० लाख भनिरहँदा आन्तरिक पर्यटकलाई पनि छोड्नु हुँदैन । किनभने नेपालका लागि त्यो पनि महत्वपूर्ण पक्ष हो । त्यसैले नेपाल सरकारका कर्मचारीहरू, निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरू सबैलाई वर्षमा एउटा निश्चित दिन देशभित्र घुम्न पठाउनुपर्छ र देशभित्र घुम्नका लागि केही इन्सेन्टिभ दिनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव अघि बढाएका छौं ।
भ्रमण वर्षको तयारी पुगेन भनेर निराश भएका व्यवसायीलाई उत्साहित बनाउन तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
सरकार अघि लाग्ने हो । त्यसमा उहाँहरूले पछ्याउनुहुन्छ । उहाँहरूलाई पछ्याउनुबाहेक अर्को विकल्प छैन । म त भन्छु, सरकालाई निजी क्षेत्रले जितेर अगाडि जानुपर्छ ।
प्रकाशित :पुस १३, २०७६
साउन ३० मा आउने भयो खगेन्द्रको पानी फोटो
‘सेन्टी भाइरस’को एक दिने कमाई १ करोड १२ लाख, आमाको कति ?
एक करोड १५ लाखमा बिक्री भयो ‘सेन्टी भाइरस’को इन्टरनेशनल राइट्स
माघ १७ देखि २२ सम्मको राशिफल
कोरोना लाग्दैमा मृत्यु हुँदैन : नयाँ रोगहरु आउने, जाने क्रम चलिरहेको छ !
लगानी अर्ब, आम्दानी करोड
राजनीतिक दबाबमा काम गर्दिनँ ! चैत्र ८, २०७६
पुस्तक नीति तय गर्न परिषद् बनाउँदैछौं चैत्र ४, २०७६
प्रधानमन्त्रीको मिर्गौला प्रत्यारोपण हामी सक्षम छौं भन्ने सन्देश हो फाल्गुन ३०, २०७६
मिर्गौला प्रत्यारोपण नेपालमै सस्तो पर्छ फाल्गुन २३, २०७६
सेयर बजारमा अहिले जोखिम छैन फाल्गुन १९, २०७६
पितृसत्तात्मक सोच मसँग पनि हुन सक्छ फाल्गुन १४, २०७६
सुनिल थापासँग छोटो गफ : भन्छन्, ‘बलिउडको अफर झन् बढ्यो' फाल्गुन ५, २०७६
संसारभरि नेपालीका फरक–फरक कथा छन् फाल्गुन ४, २०७६
सडक दुर्घटना हेर्ने जिम्मेवार निकाय नै छैन माघ २९, २०७६
सबैभन्दा धेरै मिटू राजनीतिमा छ माघ २५, २०७६